Voaheloka amin’ny famonoana olona fanindroany indray ny filoha teo aloha an’i Suriname Dési Bouterse—fa ho ampidirina am-ponja ve izy? · Global Voices teny Malagasy
"Mbola tsy vita ny ho ataon'i Suriname aminy [Bouterse]"
MpanoratraFausia S. Abdul
Voadika ny 23 Septambra 2021 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Igbo, Nederlands, Español, English
Toeram-pahatsiarovana ireo lasibatry ny famonoana olona tamin'ny desambra 1982, izay nitranga tao amin'ny Fort Zeelandia tao Paramaribo, Suriname, nandritra ny fitondrana miaramila notarihan'i Desi Bouterse. Saripika avy amin'i Dan Sloan ao amin'ny Flickr, CC BY-SA 2.0.
Tamin'ny taona 2019, i Dési Bouterse, Filohan'i Suriname teo aloha, no efa nodidiana higadra 20 taona an-tranomaizina rehefa nahita azy ho meloka tamin'ny famonoana ho faty mpisinta-kevitra miisa 15 tamin'ny taona 1982 ny fitsarana miaramila, toe-javatra matroka teo amin'ny tantaran'ny firenena vao haingana fantatra ho “December murders” [Famonoana olona desambra]. Tamin'ny 31 aogositra, na dia teo aza ny fampakarana ny raharaha nataon'ny ekipany ara-pitsarana, mbola nohamafisin'ny fitsarana ny fanamelohana tamin'ny nahatafiditra azy indray tamin'ny raharaha famonoana olona.
Tsy tao amin'ny fitsarana i Bouterse, 75 taona, rehefa navoaka ny didy noho ny rofy. Hatramin'izao, mbola tsy nanome baiko fanagadrana ny mpitsara, izay ahafahana mihevitra fa mety tsy hohazonina i Bouterse.
Raha izay moa no mitranga, dia tsy mety amin'ny maro ao amin'ity firenena Amerikana Tatsimo sy ny zanaka am-pielezana, izay—na dia teo aza ny fahavinirana nihatra tamin'ilay mpanoratra avy ao Surinam, Astrid Roemer, namariparitra an'i Bouterse ho “manam-pahasahiana tsy hay adinoina”—mahita azy ho voaheloka ho mpamono olona tsotra izao.
Tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1980 i Bouterse izay niaingan'ny fanapahana miaramila niampangana azy ho nanitsakitsaka imbetsaka ny zon'olombelona. Teny amin'ny elatry ny fanonganam-panjakana taona 1980 no nisian'ny andiam-pamonoana olona izay nohamafisin'ny Amnesty International sy ireo fikambanana hafa mpandala ny zon'olombelona ny fisiany, ka anisan'izany ny famonoana olona tamin'ny 7, 8 ary 9 desambra 1982, izay nampijaliana sy nitifirana ho faty mpanao gazety, manampahaizana ary mpitarika sendika miisa 15 nanohitra ny fitondrana miaramila an'i Bouterse.
Na dia hita ho meloka aza tamin'ny taona 2019, dia tsy mitsahatra ny mitsipaka ny mahatafiditra azy amin'izany i Bouterse , na dia ekeny aza ny fisian'ny andraikitra iraisana amin'ny maha-lohan'ny governemanta azy tamin'izany fotoana. Eny fa na dia eo am-panatrehana izao fiampangana faharoa izao aza, dia afaka—ary hanao izy—hampakatra ny raharaha. Ny fototry ny fiarovany dia ny filazana fa ny famonoana dia ao anatin'ny ezaka isorohana ny lazaina ho tetika fananiham-bohitra ataon'ny mpanjanaka azy teo aloha dia i Holandy, sy i Etazonia.
Mbola maro ny zavatra tsy fantatra tamin'ny fotoana vao nahazoan'i Suriname fahaleovantena avy amin'i Holandy tamin'ny taona 1975. Ny zavamisy dia mbola voatombo-kase ao La Haye mandra-pahatonga ny taona 2060 ireo antonta-taratasy tsiambaratelom-panjakana miompana amin'ny lazaina ho nahatafiditra ny holandey tamin'ny fanonganam-panjakana tao Suriname, ka manasarotra ny fanamarinana ny fanambaràn'i Bouterse. Na izany aza, mbola voampanga indray ny filoha teo aloha. Tsy nahaisotra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana na dia ny lazainy ho rarintsaina, mety ho nahazoana ny COVID-19, ary ireo olana ara-pahasalamana hafa aza.
Efa nilaza mialoha ny mpahay lalàna Gerard Spong, izay nanao ny asany tao amin'ny fitsarana:
Efa nampidirin'ny rafi-pitsarana tao amin'ny haratony i Bouterse. Mbola tsy vita ny ho ataon'i Suriname aminy.
Nihanitombo tao anatin'ny taona maro ny lonilonin'ny fanemorana ny fitsarana tao amin'ireo vondrom-piarahamonina Surinamese. Nandritra ny kaoferansa an-dahatsary, nantsafain'ny Global Voices i Ramon F., Surinamese mananjanaka telo monina ao Holandy, izay mahatsiahy hoe tahaka ny ahoana izany fiainana nandritra ny fitondran'i Bouterse izany:
Mbola boay kely aho raha nitranga izany ary vao tonga tao Paramaribo ny fianakavianay tamin'io taon-tsekoly io. Tsaroako ny korontana tao an-tsekoly. Tonga naka ahy ny zokiko ary nody avy hatrany tao an-trano izahay. Tsy nisy ny nanana fanazavana ny antony nanjavonan'ny mpampianatray sy ny antony nakana azy ireo natrehinay imaso. Mbola tanora ihany aho, efa hifarana ny faha-40s taonako ary tsy mihevitra aho hoe tokony hohadinoina izany. Tsy ho adinoko ny korontana teny an-dalambe sy ny tahotra. Nilaza ny ray aman-dreniko taty aoriana fa ny feon-tafondro henonay dia ho fankalazana ny tsingerintaonan'ny anabaviko.
Nandritra izany fotoana izany, nihalehibe ny taranaka Surinamese vaovao iray manontolo—aty andafy ny ankamaroany—izay tsy manana fifandraisana [tsy mahalala loatra] ny famonoana olona desambra. Na dia nisy tamin'ireo niara-niaina tamin-dry zareo aza no nandray ny an-tanana ny raharaha tamin'ny fidinana an-dalambe, ny ankamaroan'izy ireo kosa miahiahy kokoa amin'ny olana ara-piarahamonina sy toekarena. Ny hafa, tahaka an'ilay nahazo loka literera holandey Astrid Roemer, moa nanohana miharihary an'i Bouterse noho ny fijoroany nanaisotra amin'ny fakany ny fanjanahantany.
Na dia teo aza ny lasany izay mampiady hevitra, lasa filoha voafidim-bahoaka tao Suriname i Bouterse rehefa nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2010 ny Antoko Demaokratika Nasionaly nisy azy. Toerana nohazoniny ara-dalàna io mandra-pahatonga ny fifidianana 2020 izay naharesy azy manoloana ny filoha ankehitriny Chan Santokhi.
Mbola matoky ihany i Bouterse, fa “ho ao anaty lisitry ny hofidiana ho filoham-pirenena indray ny anarany.” Mety ho tsy resy lahatra tahaka izany kosa ny olompirenena Suriname, na ny ao an-tanindrazana na ny any am-pielezana.
Jamaika 7 andro izay